Technology waa wax qurux badan. Waxa ay u ogolaataa dadka inay sameeyaan badan oo ah alaabtii in ka ab hore ku riyoon karaa oo keliya ah. Tusaale ahaan, waxaad ku qori karta saacadood oo aad karaoke u gaar ah, sawiro dukaanka, filimada iyo warbaahinta kale, dhammaan dhul hal disc. Waxaa jira noocyo kala duwan oo xog Softwares laga helo suuqa shaqada u qabto in wax gubaya. Qaar ka mid ah waa lacag la'aan, halka qaar kalena lacag. Haddii Softwares bixisay ay ka qiimo lacag ah, waxaa gebi ahaanba ku salaysan aad looga baahan yahay. Haddii aad raadinayso in ay si fudud ku gubi xogta on a CD / DVD, markaas xitaa Express NCH gubaa cajalid waa ku filan si aad u samaysay shaqada. Laakiin haddii looga baahan yahay waa xirfad dheeraad ah, ka dibna waxaad u baahan tahay si aad u hesho software ku haboon naftaada. Halkan, waxaan idin keeni ugu fiican Softwares gubi Fadhi xirfadeed ee 2015.
Qeybta 1: talinayo Data Gubidda Software
Qeybta 2: sareysa 5 Data Gubidda Softwares
Talinayo: Qaybta 1 Data Gubidda Software
Wondershare DVD Creator waa xog ah extremly si sahlan loo isticmaalo software oo kaa caawinaysaa in aad la abuuro DVD ah horyalka Talyaaniga fudayd gubanaya. Iyadoo la dhisay-in arrimo badan oo aad DVD Menu, waxa aad awoodi kartaa in la abuuro DVD cajiib badan abid.
Qeybta 2: The Top 5 Data Gubidda Softwares
1. Nero Gubidda Rom 2015
Nero ayaa heysatay xogta suuqa software gubanaya u fiican 20 sano, oo ay jiraan sababo ku filan, waayo. Tusaale ahaan, waxay qaadan feature AirBurn ee ay version dambeeyay. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ka qalab Android ama macruufka gubi files si toos ah u cajalladaha aad. Haddii aan ku yaab, tixgeli SecurDisc 3.0 feature, kaas oo heerarka kala duwan ee ilaalinta xogta ku saabsan CD, DVD iyo Blu-rays. Iyadoo SecurDisc 3.0, waxaad u baahan tahay oo aan xitaa laga walwalo ka xagashada marmar iyo da'da la xiriira khasaaraha xogta. Sidoo kale, si ay u abuuraan oo gubi files ISO, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waxaa kaliya jiidi oo hoos u qaabab image ka. Nero xitaa tegey tallaabo hor leh ay version gubi ROM ugu dambeeyay oo hadda bixisaa interface a gebi ahaanba laga cabsado oo UI dheecaan ay software. Nero waa hogaamiyaha suuqa u sabab ah.
Baro wax badan oo ku saabsan Nero Gubidda Rom 2015 >>
Cyberlink ayaa abuuray awood faras of software gubashadii xogta ah ee Power2Go 10 Platinum. Software hayaa qaar ka mid ah qaababka ugu waxtar badan. Software waxay bixisaa geynta sirta awood leh, kaas oo ilaaliya xogta aad ka indho prying oo dhan. Waxad abuuri kartaa hayaan buuxa xogta oo dhan iyo nidaamka Windows files, kaliya haddii ay dhacdo shil nidaamka ama waxa lagu weeraray virus. Waxaa intaa dheer, in aad si toos ah u xiran kartaa in aad xisaab warbaahinta bulshada oo dhan, oo ay ku jirto Facebook, Twitter, Flickr, iyo kuwa kale, si ay u muuqan download warbaahinta iyo abuuraan nusqado oo isla. Xitaa in aad abuuri karaan cajalladaha sawir gallery kuu gaar ah, iyo wax ka badan samayn la Power2Go 10 Platinum. Aragtida ugu wacan oo software waa ay interface siman dheecaan.
Badan oo ku saabsan Power2Go 10 Platinum >> Baro
3. Roxio Rooti 14 Pro
Version ayaa Pro of Rooti 14 yimaado oo dhan muuqaalada Rooti 14 Titanium iyo in ka badan. Iyadoo version this, aad qorayaasha kartaa DVD iyo Blu-rays, taas oo macnaheedu yahay aad samayn karto wax kasta - abuuro filimada la horyaal, bedeley iyo cutubyada. Waxaad qabsan karaa videos ka Koox ka mid ah fursadaha - web, kaamirada, DVD-yada, iyo xataa qortid shaashadda u gaar ah. Waxaad qabsan karaa audio, waxaa edit, kor loogu qaado tayada, iyo buuq sanqadhiis la saarto. Software ayaa xitaa isku aad xisaab bulshada qaybsiga fudud ee warbaahinta aad.
Badan oo ku saabsan Roxio Baro Rooti 14 Pro >>
4. Ashampoo Gubidda Studio 15
Ugu danbeeyay Ashampoo Gubidda Studio 15 qalabeysan yahay oo dhan feature iyo technology si ay u khusayso xataa da'da kaydinta daruur. Technology M-cajalid hayaa xogta aad amaan u ah oo ku saabsan 1000 sano. Waxaa jira taageero HD buuxa, oo waxa uu xitaa jeedsadaa oo dhan sawiro aad galay duubey. Xitaa waxaad ka heli multi-lakabka BDXL taageero disc ilaa 128GB ee kaydinta. Qeybta ugu wanaagsan waa in ay xitaa waxay bixisaa sirta lagu hormariyo ee dhammaan xogta aad u xasaasi ah.
Baro wax badan oo ku saabsan Ashampoo Gubidda Studio 15 >>
5. NCH Express Guba cajalid
NCH ​​waa shirkad liiska weyn ee Softwares fasalka xirfad ganacsi audio iyo video ah. Cajalid Gubashada Express waa software gubashadii ROM dambeeyay. Tani waa mid ka mid ah gubidda ROM yar ee suuqa, taas oo uu leeyahay DVD fiican iyo Blu-ray awoodaha qoraalka. Jiitaa A oo hoos u yahay ayaa loo baahan yahay oo dhan in ay gubaan warbaahinta oo dhan. Waxad abuuri kartaa oo aad sanamyadooda ISO in cajalladaha ah. Software wuxuu taageeraa tiro balaadhan oo ah maqal iyo video qaabab. Waxaa jira waxyaabo badan oo dheeraad ah in software samayn karaa, waadna waxaa ku filan si ay u sheegeen in ay tahay mid ka mid ah macluumaadka ugu awooda badan gubanaya Softwares halkaas.
Baro wax badan oo ku saabsan NCH Express Guba cajalid >>
> Resource > DVD > The Top 5 Professional Data Gubidda Softwares